Shiinaha Silicone Keychains warshad iyo soosaarayaasha | SJJ
Silicone Keychains iyo furayaasha waxaa soo dhoweeyey dadka adduunka oo dhan sababta oo ah tayo sare leh, waarta muddo dheer iyo dabeecad midab leh. Waxaa loo adeegsadaa dallacsiinta, isboortiga, dugsiyada, xafladaha iyo dhacdooyinka kale.
Silikoon Keychains iyo furayaasha waxaa soo dhoweeyey dadka adduunka oo dhan sababtoo ah tayadiisa sare, raagaya muddo dheer iyo sifo midab leh. Waxaa loo adeegsadaa dallacsiinta, isboortiga, dugsiyada, xafladaha iyo dhacdooyinka kale. Thefurayaasha silikooniyo furayaasha tayada sare leh waa alaabada ugu fiican ee kor u qaada ururkaaga ama shirkadahaaga, muujiya fikradaha naqshadeeyayaasha iyo nafaha. Cabbirro kala duwan iyo isku -darka midabka ayaa sameeyafurayaasha silikooniyo furayaasha oo ka sii qurux badan oo soo jiidasho iyo soo jiidasho leh, aadna uga sahlan in lagu xayeysiiyo astaanta dadweynaha. Ma jabin doonaan, ama midabyadu xitaa ma isticmaali doonaan muddo dheer, waxay gaaraan faa'ido dhaqaale oo aad u sarreeya.
Hadiyadaha Pretty Shiny waxay bil kasta dhoofiyaan malaayiin silsilado furaha silsiladaha iyo furayaasha. Waqtiga tayada iyo hogaaminta waxaa amaanay macaamiisheena. Pls nala soo xiriir waqti kasta, kooxdayada xirfadleyda ah ayaa kaa caawin doonta mashaariicdaada markii ugu horeysay.
Naqshadaha: 2D, 3D, hal dhinac, laba dhinac
Midabada: Waxay la jaanqaadi kartaa midabada PMS, wareegga, qeybta, iftiiminta mugdiga, midabada ku habboon ar
Lifaaq: Giraanta ka bood, Furayaasha furaha, furayaasha furaashka, jillaab ama raac tilmaamahaaga
Hore: Kiisaska Taleefanka Silikoon
Xiga: Silicone Coins Boorso & Silicone bacaha
Furayaasha Keydka ah
Shiinaha Warshadaha Furaha Awm ugu Fiican
Shiinaha Best Awm Keychain Factory
Qiimaha ugu fiican ee Mustang Keychain ee Shiinaha
Xigashooyinka ugu fiican ee Mustang ee Shiinaha
furayaasha furaashka ah
Silsiladda Silsiladda Keychain
Digaag Shrilling Qaylinaya